Faha 10 taona ny FAM Toliara - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Faha 10 taona ny FAM Toliara
Feno 10 taona tamin’ity taona 2012 ity ny nijoroan’ny fiangonana Apokalypsy tao Toliara. Nisy araka izany ny fivoriam-bavaka lehibe izay notanterahana tany an-toerana.
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Sabata 24 Martsa 2012 lasa teo ny fanamarihana ny faha 10 taona nijoroan’ny Fiangonana Apokalypsy Toliara. Mialohan’ny fotoam-bavaka lehibe izay notontosana tamin’io sabata io anefa dia nisy ny “recyclage pastoral” izay niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra avy eo amin’ny foibe. Nanomboka ny Alarobia 21 Martsa 2012 izay “recyclage pastoral” izay ary ny Zoma 23 Martsa kosa no nifarana. Ny Sabata 24 Martsa 2012 kosa no notontosaina ny fotoam-bavaka lehibe izay niarahana tamin’ireo mpino avy eo amin’ny rezionaly Antananarivo, izay notarihin’ny pasitera Alpha ary ireo delegasiona miaraka aminy, sy ny fiangonana manodidina an’i Toliara.
Tao aorian’ny fiderana makotroka sy ny rojom-bavaka lehibe tamin’ny tapany maraina dia nizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ireo vahoaka maro be tonga nanotrona ity fotoan-dehibe ity ny pasitera Alpha RAKOTONIRINA. Nalaina tao amin’ny Ohabolana 11: 24-31; Lioka 18: 18-30 ary Filipiana 4: 4-9 izay tenin’Andriamanitra izay. Natomboka tamin’ny fanokanana ireo diakona mihisa 61 kosa ny fotoana tapany hariva. Tao aorian’izay dia niroso tamin’ny fanosorana ireo loholona mirahalahy sy ny fanolorana ireo biraon’ny sampana tanora sy ny rantsana Oliva Toliara. Nofaranana tamin’ny firaisana latabatra tamin’ny Tompo kosa ireo rehetra ireo, izay marihina fa tsy nifarana raha tsy nilentika ny masoandro. Ny alahady faha 25 Martsa 2012 kosa dia nisy ny fampakaram-badin’ny zanak’ondry ka mpivady mihisa 16 no niroso tamin’izay fanamasinana ny fanambadiana izay.
Tamin’ny taona 2002 no nijoro voalohany tao Toliara ny fiangonana Apokalypsy. Niantomboka tamin’ny tokatrano 2 izany tany am-piandohana ary tao amin’ireo tokatrano ireo ihany no nandray ny fivoriam-bavaka isan-tsabata sy ny vondrom-bavaka. Tao aorian’izay dia nifindra tao amin’ny efitrano malalaka Capricorne ny toeram-pivavahana, avy eo tao amin’ny Lycée Technique ary nanomboka tamin’ny 16 Aprily 2003 kosa no nifindra tao Andakoro. Amin’izao fotoana izao kosa dia efa miparitaka ho amin’ireo rezionaly 8 ny fiangonana dia ny rezionaly Toliary, Morombe, Betioky, Ampanihy, Benenitra, Beroroha, Sakaraha, ary Bezaha. Ho an’ny Fiangonana Apokalypsy ao amin’ny rezionaly Toliary manokana dia ao Andakoro no misy ny foibeny ary ahitana izay fiangonana izay ihany koa ao Antaravay sy Antanambaomotombe. Ahitana paroasy efatra ao Toliara dia ny paroasy Andakoro, Befanamby, Saint Augustin ary ny paroasy Avaratra. Ao amin’ny distrikan’i Ankazoabo sisa no tsy ahitana fiangonana Apokalypsy, izay nambaran’ny tompon’andraikitra fa ho sokafana amin’ity taona ity ihany koa raha sitrapon’Andriamanitra. Izany dia tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny faha 10 taona nijoroan’ny fiangonana hatrany.
Ankoatra izay dia dingana lehibe kasain’ny Fiangonana Apokalypsy Toliara ho faranana amin’ity taona ity ny famitana ny trano fivavahana lehibe ao Andakoro, ary ny trano vadim-piangonana. Ao amin’ity trano vadim-piangonana ity no hisy ny tranon’ny pasitera, ny trano fandraisam-bahiny sy ny radio.
Fihaonam-be Antananarivo 7 aprily 2012
Ny sabata 07 Aprily 2012 ho avy izao dia hisy indray ny fivoriam-be eo anivon’ny fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo. Hisy araka izany ny vaovao lehibe izay ho zarain’ny pasitera Mailhol amintsika, ary indrindra ny firaisana latabatra amin’ny Tompo. Aorian’izay kosa, izany hoe ny Alahady 08 Aprily 2012 tontolo andro, dia hisy ny conférence lehibe iarahana amin’ny pasitera Mailhol. Mandritra io conference io dia hizara ny tsiambaratelo hialana amin’ny fahantrana sy ny olana ara-bola ary ny aretina sy ny fatoran’ny zava-mahadomelina ny pasitera Mailhol. Etsy amin’ny foibe Apokalypsy Ambodinisotry no hanatontosana izany, ary manomboka amin’ny 09h00 maraina kosa ny fotoana. Ho an’ireo izay tsy afaka amin’io Alahady io dia mbola miverina izany ny Alarobia, ny Alakamisy ary ny Zoma samy amin’ny 06h00 ariva, ary mbola ao amin’ny foibe Apokalypsy ihany no hanaovana azy io.
Batisa teny Andranotapahina 24 febroary 2012
Batisa Andranotapahina 14 avril 2012